Tora mapikicha ako, mafoni kana imwe data kubva ku iPhone nekukurumidza uye nyore neFoneLab | IPhone nhau
Ignacio Sala | | iOS, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kwemakore mashoma uye sezvo tekinoroji yashanduka, vazhinji venyu, zvirokwazvo makasiya komputa yako kamera mudhirowa kuti uvimbe chete uye chete paiyo iPhone kutora chero foto kana vhidhiyo, kunyangwe hazvo ivo havatipe isu iyo yakafanana nhanho ye optical zoom kuti aya macamera akatipa.
Izvi zvinogona kugadziriswa nekuswededza mukati zvishoma, saka kusvikira nhasi, hapana chikonzero chekuenderera uchizvishandisa. Nenzira iyi, iyo iPhone yave chapupu chehupenyu hwedu pamwe nekuve wekufamba naye kwatinenge tiine ruzivo rwedu rwese, saka kana tikarasikirwa nechishandiso, chakabiwa kana chakakuvara. mutambo unogona kutyisa.
Nzira yakanakisa yekugara tichichengeta mapikicha edu, vanobata navo, data rekarenda uye chero faira pane yedu iPhone yakachengeteka kushandisa iCloud, iyo gore rekuchengetedza sevhisi inopihwa naApple, iyo yekutanga uye yemahara nzvimbo iri 5 GB, nzvimbo inoita kwete kupa zvakawanda, kutaura chinhu. Vakomana vanobva kuCupertino vanotipa akasiyana mapurani ekuchengetedza nemitengo inokwezva asi vazhinji vashandisi vasingade kuishandisa, chero chikonzero.
Muzviitiko izvi, kana tikarasa mudziyo, yakabiwa kana yakakuvara zvakananga pasina mukana wekupora, tisati tachema kudenga uye tichiedza kutsvaga chikonzero nei tisina kubvumirana chirongwa chekuchengetedza cheICloud, kunyangwe dai yaive iyo yakakosha imwe uye yakachipa, isu tinofanirwa kufunga nezvekushandisa FoneLab, chishandiso icho tinogona kudzoreredza chero chero data kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch.
1 Chii chinonzi FoneLab
2 FoneLab inotipei
2.1 Zvakananga kubva mudziyo
2.2 Kubudikidza nekopi yeTunes
2.3 Kuburikidza neICloud kopi
3 Tora zvakare yakadzimwa data neFoneLab
4 Ndekupi kwandinotora pasi FoneLab
5 Iwe unoda kuhwina rezinesi reMac neWindows?
Chii chinonzi FoneLab
FoneLab application isiri iyo chete inotibvumidza kuti titore chero chero faira rinowanikwa pane yedu kifaa, asi zvakare rinotibvumidza isu dzosa mafaera atakakwanisa kudzima pane imwe nguva, asi ikozvino isu tanga tichida zvakare, kungava vekutaurirana, mafoto, mafaera, karenda kugadzwa, manotsi ...
Nenzira, pese patinovhura iPhone nyowani, Apple inomutsa iCloud pane yedu terminal, kuitira kuti yega yega kuonana, karenda kugadzwa, manotsi, mapassword, zviyeuchidzo, mabhukumaki, maemail uye zvimwe. zvinowanikwa kuburikidza neICloud se backup, kuwedzera kune zvimwe zvikonzero.
FoneLab inotipa nzira nhatu dzekuedza kudzoreredza zvemukati izvo isu zvatakachengeta pane iyo iPhone, iPad kana iPod touch, zvimwe zvacho zvisingade kuti isu tive nechigadzirwa panyama, chakanakira kesi umo mudziyo warasika kana kubiwa.
Zvakananga kubva mudziyo
Kana isu tiine mudziyo wedu padhuze, kunyangwe muchiitiko chekuve nenjodzi isinga gadzirisike, chero bedzi iTunes ikazviona, tinokwanisa kuzviwana kuti tikwanise kutora ruzivo rwese rwunowanikwa mukati. Nenzira iyi, FoneLab inosvika zvakananga kune yedu terminal uye inotiratidza ruzivo rwese rwunowanikwa mune inoteedzera yakakamurwa nezvikamu, seMapikicha, mameseji, Zvinyorwa, Karenda, Vabati ... kuitira kuti tikwanise kusarudza data ratinoda kupora.
Kubudikidza nekopi yeTunes
Asi kwatiri, chinouraya chakarasika, chakabiwa kana kumira kushanda zvachose, tinogona kushandisa kopi yataive takachengeta muTunes. FoneLab inotibvumidza kuti tiwane backup uye inotitaridza ruzivo rwese rwakakamurwa nezvikamu kuti tikwanise kusarudza data ratinoda kupora, nekuti dzimwe nguva hatidi kudzoreredza zvese zvirimo zvakachengetwaasi chete mafoto achangoburwa kana mavhidhiyo.
Vazhinji vashandisi vakasiya iTunes paunenge uchigadzira macopy makopi, kunyanya nekuda kwekusashanda kwayo, kunonoka kwayo uye kusagadzikana kwayo, kunyangwe hazvo mune yekupedzisira kugadzirisa huwandu hwakawanda hwezvisarudzo hwabviswa kuti huwedzere "hushamwari".
Asi zvinogara zvichikurudzirwa kubatanidza yedu iPhone, iPad kana iPod touch, zvirinani kamwe chete pasvondo, kugadzira kopi yekuchengetedza, nekuti kunyangwe hazvo tichifunga zvakadii nezve "izvo hazvigone kuitika kwandiri", isu tinogara tine njodzi yekurasikirwa neruzivo rwese rwakachengetwa mukati maro, uye kana ari akakosha mafoto, zvinorwadza zvakanyanya .
Kuburikidza neICloud kopi
Sezvandambotaura pamusoro, pese patinovhura iPhone, Apple inomisikidza iCloud nekukasira uye ine basa rekugadzira makopi mazhinji emadhi data edu, kusanganisira mafoto nemavhidhiyo, kudzikisira nzvimbo yatakatenga. Kuburikidza neFoneLab, futi tinogona kuwana ruzivo rwese rwunowanikwa mune backup, kopi inoitwa otomatiki uye iyo inowanzo, kazhinji kazhinji, yakawanda-inowedzeredzwa mukopi iyo yatinogona kuita vhiki nevhiki, chero bedzi tichiyeuka kuzviita.
Sezvazvakaita muzvikamu zvakapfuura, ruzivo rwese rwatakachengeta muICloud rucharatidzwa rwakamisirwa nezvikamu, kuti tikwanise kuenda kusarudza rese data ratiri kuda kupora, kuti uwane iwo, teedzera iwo kuchinhu chitsva, gadzira yekuwedzera backup, gadzira rondedzero ... kana chero chikonzero.
Kuti uite izvi, isu tinofanirwa kushandisa yedu Apple ID pamwe chete ne password yedu, kuitira kuti FoneLab igone kuwana kopi yedu yekuchengetedza, kurodha pasi uye kuriongorora kuti itiratidze ruzivo rwese rwatinogona kuwana.
Tora zvakare yakadzimwa data neFoneLab
Idzi nhatu sarudzo idzo FoneLab inotipa isu patinotora kopi yemafaira edu, mapikicha, mavhidhiyo, vanobata nevamwe, Ivo zvakare vanotibvumidza isu kuti titore mafaera ayo achangobva kubviswa, chishandiso chakanakisa chinogona kuponesa chaihwo hupenyu hwedu pane kanopfuura kamwe chiitiko.
Asi isu tinofanirwa kuziva kuti hazvishande zvishamiso uye tisati tatanga kutaridza kupenga, isu tinofanira kuziva iripi ingave iyo data yatakabvisaSezvo, kana kubvira kubviswa kwayo tisina kuita backup, iyo chete nzvimbo yatichakwanisa kuiwana ichave yakananga pane chishandiso chaicho. Zvakadaro, inofanirawo kucherechedzwa kuti, nekuenderera mberi kwekushandisa, data rinongonyorwa patsva pachigadzirwa Neichi chikonzero, zvakakosha kuita ongororo yechigadzirwa pamwe nemuyedzo vhezheni yechirongwa kuti uone izvo zvinogona kudzorerwa.
Ndekupi kwandinotora pasi FoneLab
FoneLab isoftware yakagadzirwa naAiseesoft, inowanikwa kune ese Windows neMac uye parizvino iri mutengo pa49,95 euros. Aiseesoft inotipa chiyero chekuyedza chese ari maviri mavhezheni, kuti tikwanise kuongorora izvo zviri muchinhu zvacho zvinogona kudzoreredzwa neiyo yakabhadharwa vhezheni. Kana iwe uchida kurodha pasi chishandiso unofanira chete tinya pano.
Iwe unoda kuhwina rezinesi reMac neWindows?
Uye zvakare, muActualidad iPhone tinokuunzira kushamisika sezvo isu tichizobira marezinesi maviri, imwe yeWindows uye imwe yeMac. kutora chikamu muRaffle unofanira kungoita rova kiyi yelayisensi. Mumufananidzo unotevera iwe unoona makiyi eMac neWindows uko kune hunhu husipo hunoratidzwa nemubvunzo, munhu wekutanga anofungidzira kiyi chaiyo ndeyako. Kuti uite izvi, iwe unongofanirwa kurodha pasi application, isai uye edza kuisa pasiwedhi kusvikira iwe wawana iko chaiko.
Nhanho yakanaka kune vese!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Tora mapikicha ako, mafoni kana imwe data kubva ku iPhone nekukurumidza uye nyore neFoneLab
kiyi ye windows yaive yekushandura chiratidzo chemubvunzo kuva 0
mm zvinoita sekunge kuna mac ndainonoka, kunyangwe ini ndisingazive muemail kuti ndeipi yekuisa
Iyo iOS 11.3 beta 4 kodhi inoratidza kuti iyo TV app inogona kusvika muBrazil munguva pfupi
Apple inodzosera iro zita rekutanga reBooks mune yazvino beta yeiyo iOS 11.3